पश्मिना उद्योगमा तीन दशक : धागो रंगाउने प्राविधिकदेखि निर्यात उद्यमसम्म | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता पश्मिना उद्योगमा तीन दशक : धागो रंगाउने प्राविधिकदेखि निर्यात उद्यमसम्म
on: January 07, 2019 अन्तरवार्ता
पश्मिना उद्योगमा तीन दशक : धागो रंगाउने प्राविधिकदेखि निर्यात उद्यमसम्म
धन लामिछाने, सचिव, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ
सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न वस्तुलाई प्राथमिकताका वस्तु भन्दै ‘नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस)’ मा समावेश गरेको छ । यसरी प्राथमिकता पाउने वस्तुमध्ये पश्मिना पनि एक हो । नेपालमा उत्पादन भएका पश्मिना हरेक वर्ष अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने गरेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चालू आवको पहिलो ५ महीनामा देशबाट रू. १ अर्ब २८ करोडको पश्मिना निर्यात भएको छ । २०५६ सालमा माउण्ट मनास्लु पश्मिना उद्योग स्थापना गरेसँगै धन लामिछाने यस क्षेत्रको व्यवसायमा संलग्न भएका हुन् । त्यसअघि उनी कार्पेट उद्योगमा धागो रंगाउने सामान्य प्राविधिक थिए । पश्मिना उद्योगमा अवसरै अवसर देखेका उनी अहिले देशबाट वर्षेनि ५० हजार थान पश्मिना निर्यात गर्छन् । प्रस्तुत छ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघका सचिवसमेत रहेका उनीसँग पश्मिना उद्योगका सम्भावना तथा चुनौतीको सेरोफेरोमा रहेर आर्थिक अभियान दैनिककी रञ्जु काफ्लेले गरेको कुराकानी :
निर्यातको नगद अनुदान बढ्यो नि ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हाम्रो पश्मिना उद्योगको अनुदान एक प्रतिशत बढेको छ । नगद प्रोत्साहन लिन पार गर्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रिया अहिले पनि उस्तै छन् । राज्यले बाह्य व्यापारका समस्या कम गर्न अनुदान बढाएर पहल गरेको छ । त्यसैले अत्यन्त खुसी लागेको छ । नगद अनुदान बढाउने सरकारी निर्णयले उद्योग क्षेत्रका अरू धेरै समस्या क्रमशः सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा पलाएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न निर्यात बलियो हुनुपर्छ । त्यसको शुरुआत भएको छ । उत्पादन क्षेत्रलाई अझै धेरै प्रोत्साहित गर्दै बलियो बनाउनुपर्छ ।
पश्मिना उद्योगलाई कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ ?
३० वर्षपहिले म कार्पेट उद्योगमा धागो रंगाउने प्राविधिकको काम गर्थें । त्यसबेला नेपालको कार्पेट उद्योग अत्यन्त समृद्ध अवस्थामा थियो । विदेशी बजारमा नेपाली कार्पेटको ठूलो माग थियो । नेपालको लोगो भएका कार्पेट हातहातै विक्री हुन्थे । तर, त्यस्ता कार्पेट बनाउने, धागो ड्राई गर्ने मेशिनचाँहि नेपालमा थिएन, भारत जानुपथ्र्याे । सोही क्रममा मैले काम सिक्ने र उद्योग चिन्ने अवसर पाएको हो ।
अरू व्यवसाय नगरेर किन पश्मिनाकै व्यापार रोज्नुभएको ?
त्यसबेला मलाई व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने थियो तर यही नै गर्ने भन्ने योजना थिएन । २०५०/५२ सालतिरबाट विदेशी बजारमा कार्पेटको माग घट्यो र पश्मिनाको लहर चल्यो । मेरा लागि दुवै उद्योगको काम उस्तै थियो । मलाई काम आउँथ्यो, त्यसैले मैले यही काम रोजें । मसँग पश्मिनाको धागो रंगाउने मेशिन थिए अनि म उद्योग स्थापना गरेरै यस क्षेत्रमा होमिएँ । कुनै योजनाविनै मलाई सन् २००० तिर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आएको पश्मिनाको अत्यधिक मागले यस व्यवसायमा ल्याएको हो भने पनि हुन्छ । त्यसअघि म कार्पेट उद्योगको सामान्य प्राविधिक थिएँ । धागो रंगाउने काम गर्थें ।
तपाईको उद्योगमा कतिजना कामदार छन् ? र, महिला पनि छन् ?
मौसमी व्यवसाय हो यो । मेरो उद्योगमा आठजना पूर्णकालीन र २२/२५ जना आवश्यकताअनुसार काम गर्ने कामदार छन् । लुम चलाउने प्राविधिक पुरुष छन् । अरू उद्योगको तुलनामा मसिना हातले गर्नुपर्ने काम धेरै हुने भएकाले महिला कामदारको संख्या धेरै छ । खासगरी सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरमा मागअनुरूप उत्पादन तयार गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने, आकर्षक प्याकेजिङ गर्ने र डिसेम्बर लागेपछि आपूर्तिको काम हुन्छ ।
अनि तपाईका औद्योगिक उत्पादन कहाँ कहाँ विक्री हुन्छन् ?
मेरा सबै उत्पादन विदेशी बजार जान्छन् । खासगरी यूरोपका इटाली, फ्रान्स, जर्मन र स्विट्जरल्याण्ड निर्यात हुन्छ । सबैभन्दा धेरै ८० प्रतिशत अमेरिका जान्छ । त्यहाँका उपभोक्ता हाम्रा उत्पादन सर्वाधिक रुचाउँछन् । माउण्ट मनाश्लु पश्मिना उद्योगले वर्षेनि ४०/५० हजार थान निटिङ र वेभिङ भएका पश्मिनाका सल, मफलर, स्वेटर, पन्जालगायत विभिन्न उत्पादन अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने काम गर्छ ।
नेपालको पश्मिना उद्योग अहिले कस्तो अवस्थामा छ भन्ने लाग्छ ?
अवसर नै अवसर भएको नेपालको पश्मिना उद्योग समस्याको भुमरीमा रुमल्लिएको थियो । अहिले केही सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ । हामी उद्यमी अझै राम्रो औद्योगिक वातावरण बन्छ भन्नेमा आशावादी छौं । राज्यको नीतिले उद्योगलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भारत, चीन र बंगलादेशमा उद्योगलाई लगानीको ठूलो हिस्सा नगद प्रोत्साहनसहित धेरै सुविधा दिइएको छ । जसले त्यहाँका उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । उद्योगीले सहुलतपूर्ण ऋण सुविधा पाउँछन् । निर्यात उद्योगलाई थप अरू सुविधा पनि हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो केही अवसर नै छैन । भएका पनि अत्यन्त कम छन् । निर्यात उद्योग बलियो बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिन्छ भन्ने आशामा छौं ।
पश्मिना उद्योगका व्यावसायिक समस्या पनि बताइदिनुहोस् न ।
यो उद्योगलाई चाहिने दक्ष र शीपयुक्त कामदार पाउन एकदमै समस्या छ । हामीकहाँ त्यस्तो शीप भएका कामदार नै छैनन् । भारत, बंगलादेशबाट कामदार ल्याउनुपर्छ । स्वदेशमै कामदारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न लामो समय र ठूलो लगानी चाहिन्छ । तयार गरिएका कामदार सोही उद्योगमै काम गर्छन् भन्ने सुनिश्चितता नभएकाले उद्योग गर्नेले जोखिम चाहँदैन । उद्योग सञ्चालन गर्ने बैंक ऋणको ब्याजदर निरन्तर परिवर्तन हुन्छ । कहिले ऋण पाइँदैन, ऋण पाए धेरै ब्याज तिर्नुपर्छ । यसो गर्दा औद्योगिक उत्पादनको लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन्छ । निर्यातको मापदण्ड छैन । त्यसैगरी निर्यातयोग्य उत्पादन पहिचान गर्ने/गराउने र उपभोक्ता आकर्षित गर्ने ‘अन्तरराष्ट्रिय स्तरका व्यापार मेला’लगायत अवसर पनि छैनन् । उद्योग/व्यवसाय गर्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।
व्यवसायीहरू पश्मिना उद्योगमा के–कस्ता अवसर देखेर आकर्षित हुन्छन् ?
पश्मिनाका उत्पादन अत्यन्तै नरम, हलुका र न्याना हुन्छन्, त्यसैले विदेशीहरू पश्मिनाका उत्पादनलाई मन पराउँछन् । जुन हामीजस्ता उत्पादकलाई राम्रो अवसर हो । बजारले चाहेको आकर्षक डिजाइनको सुनिश्चितता दिने, विविधता युक्त उत्पादन तयार गर्ने र समयमा डेलिभरी दिन मात्रै सके पनि यो व्यवसाय विस्तार हुन सक्छ । विश्व बजारको फराकिलो अवसर सदुपयोग गर्दै कारोबार चलिरहेको छ ।
राज्यबाट के–कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
निर्यात बढ्ने नीतिगत स्पष्टता कायम भए धेरै अवसर आउँछन् । राज्यले त्यसलाई ध्यानमा राखिदेओस् भन्ने हो । त्यसैगरी सरकारले व्यावसायिक जटिलता तत्काल फुकाउन सहजीकरण गर्ने र शीप विकास गर्ने तालीम दिनुपर्छ । भनेर बोलेर होइन, व्यवहारमा परिवर्तन आओस् भन्ने व्यवसायीको माग हो । राज्यले भनेको धेरै छ, तर त्यसअनुसार काम भएको छैन । भनिएका सबै प्रावधान सहजतापूर्वक कार्यान्वयन भए निर्यात बलियो हुन्छ । देशमा विदेशी विनिमय संकट हुँदैन । मुख्यगरी उद्योग ग्राम बन्ने/बनाउने, औद्योगिक ऋणको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्ने, शीप विकास गर्ने तालीम र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने हो भने निर्यात सबल हुन्छ ।